आजै आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्नुहोस् नत्र यस्ता खतरनाक रोगहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ - ज्ञानविज्ञान
मानिसहरुको जीवनशैलीले गर्दा आजभोली उनीहरु दिनप्रतिदिन विभिन्न रोगहरुको शिकार हुदै गईरहेका छन् । अहिलेका केटाकेटीहरु प्रविधिले गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि बिगारिरहेका छन । जसले गर्दा मानसिक समस्या निम्त्याउने गर्दछ ।
आधुनिक जीवनशैलीले मानिसलाई दिन-प्रतिदिन अस्वस्थ बनाउँदा रोगहरु पनि जटिल बन्दै गएका छन् । चिकित्सा विज्ञानलाई नै चुनौति दिने रोगले मानिसको ज्यान लिइरहेको छ भने उपचार पनि कठिन बन्दै गएको छ । केही रोगको त पूर्ण उपचार पत्तासमेत लागेको छैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले क्यान्सरलाई चिकित्सा विज्ञानलाई नै चुनौति दिने रोगको सूचीमा राखेको छ । खाद्यान्नमा बढ्दो रसायन, रेडिएसनको प्रभाव, धुम्रपान र बंशाणुगत कारणले यो रोगको केमोथेरापी, रोडिएसन थेरापी र सर्जरीका माध्यमबाट उपचार गरिन्छ । क्यान्सरको पूर्ण उपचार अझैसम्म पत्ता लागेको छैन ।
विश्वकै दोस्रो स्वास्थ्य समस्या हो-मधुमेह । रगतमा सुगरको मात्रा ११० र खाएको समयमा २०० एमजीभन्दा माथि पुगे मधुमेह भएको मानिन्छ । मधुमेहले शरीरका सबैजसो अंगमा असर गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हृदयघात विश्वकै तेस्रो र मृगौला रोग चौथो स्वास्थ्य समस्या हो । नेपालमा हरेक वर्ष ३ हजार हाराहारीको मृगौला फेल हुन्छ ।
मस्तिष्कको चेतना प्रवाहित गर्ने प्रणालीमा असर गर्ने रोग, अल्जाइमर विश्वकै पाँचौ नम्बरमा पर्ने स्वास्थ्य समस्या हो । यो रोग लाग्नुको मुख्य कारण हालसम्म अज्ञात छ । बुढ्यौलीमा यो रोग बढी देखिन्छ । इन्फ्लुएन्जा छैटौं नम्बरमा पर्ने रोग हो ।
स्वाइनफ्लु (एच वान-एन वान) भाइरसका कारण ज्यान गुमाउने संख्या बढेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २००९ जुन ११ मा ‘फ्लु पेन्डामिक’ घोषणा गरेको थियो । सन् २०१० पछि इन्फ्लुएन्जा नियमित स्वास्थ्य समस्या बनिरहेको छ ।
स्ट्रोक अर्थात रक्तप्रवाह रोकिएर मस्तिष्कका ‘सेल’ मर्ने यो रोग मानिसको मृत्यु गराउने भयानक अवस्था हो । प्यारालाइसिस समेत गराउने यो रोग विश्वको सातौं नम्बरमा पर्ने स्वास्थ्य समस्या हो । चिम्पान्जीबाट मानिसमा सरेको एड्स विश्वव्यापी संकटको रोग हो । जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वकै आठौं नम्बरमा पर्ने स्वास्थ्य समस्या हो ।
सुरक्षित रक्तदान र यौनसम्पर्क तथा यौनजन्य रोगको समयमै परीक्षण यसबाट जोगिने मुख्य उपाय हुन् । विश्वभर हाल करिब ३७ मिलियन मानिस एड्सबाट प्रभावित छन् ।
अन्य केही भयानक रोगहरु :
यो रोगको बारेमा पहिले देखि नै सुनिदै आएको छ । यो रोगको भाइरस लामखुट्टेद्धारा सर्दछ । व्यक्तिको खुट्टाको आकार असामान्य रुपले बढ्दै जानु यस रोगको लक्षण हो । यस रोगको समयमै उपचार गरिएन भने शरिरभर फैलिदै जाने हुन्छ ।
खतरनाक रोगमभ्ये यो पनि एक हो । जसलाई ट्री वार्क पनि भनिन्छ । यो हाम्रो छालासम्बन्धि दुर्लभ रोग हो । पापीलोमा नामक भाइरसका कारण यो रोग लाग्दछ । जसमा पुरै शरिर रुख जस्तै देखिदै जान्छ ।
यो रोग पनि कुनै खतरनाक रोग भन्दा कम छैन । यसमा सानो उमेरको व्यक्ति पनि बुढेसकाल लागेको जस्तो देखिन्छ । यो रोग ८० लाख व्यक्तिमध्ये एउटा व्यक्तिमा देखिन्छ । यो रोग लागेपछि सानैदेखि कपालमा रौ उम्रिदैन, आँखा नदेख्ने हुन्छ र किशोरावस्थामा अनुहारमा चाउरी पर्दै जान्छ ।
यस रोगको असर दिमागमा पर्न जान्छ । विरामीले बोल्ने भाषाको तरिका एकाएक बदलिँदै जान्छ । यसमा रक्तश्रावले व्यक्तिको मस्तिष्कमा असर पार्दछ । यस रोगका विरामीले आफ्नो मातृभाषा बोल्न बिविर्सेर कहिल्यै नसुनेको विदेशी भाषा बोल्न थाख्दछन् ।
केहि रोगहरु ठिक गर्न हिड्नु फाइदा :
शारीरिक गतिविधिको विकास गर्ने :
लिफ्टको सट्टा सिढीको प्रयोग गर्ने ।
सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा घर पुग्नु एक स्टप अगाडी नै ओर्लने बानी बसाल्ने ।
नजिकैको पसल जानु परेमा हिड्ने कोशिश गर्ने ।
घरमा कुकुर छ भने कुकुरलाई लिएर घर वरिपरि चक्कर लगाउने प्रयत्न गर्ने ।
तनाब धेरै लिदाँ कस्ता रोगहरु लाग्छन् ?
५. टाउको दुख्ने
७. ग्याष्ट्रिकटेस्टाइन रोग
८. निन्द्राको समस्या
स्वस्थ्य रहन् यी कुराहरुलाई जिबनमा लागू गर्नुहोस् :
अक्सर हामी खान हतारिन्छौं । सोचाई के छ भने, खाना खाँदा धेरै समय खर्च गर्नु हुँदैन । यो समयको वर्वादी हो ।जबकी हाम्रो जीवनको उर्जा, शक्ति, ताकत भनेकै खानाबाट मिल्ने हो ।
खाना खाँदा एकदम आरमपूर्वक खानुपर्छ । पटक्कै हतार नगरी । प्रशन्न, खुसी, आनन्दित भएर । खाना खुब चपाएर खानुपर्छ । हरेक गाँसमा स्वाद लिनुपर्छ ।
हाम्रो थालमा कुन खानेकुरालाई बढी महत्व दिने ? त्यो हाम्रै हातमा छ । त्यसैले जति खाना लिइन्छ, त्यसको अधिकतम् हिस्सा सागसब्जीको होस् ।
हरियो सागसब्जी प्रशस्तै सेवन गरौं । हरियो सागसब्जी फाइबरको राम्रो स्रोत हो । फाइबरले पाचन पद्धतीमा सहयोग गर्छ । जब पाचन यन्त्र चुस्त तथा तन्दुरुस्त हुन्छ, त्यसको प्रभाव समग्र शरीरमा रहन्छ ।
साथै, बेमौसमी सागसब्जी सेवन नगर्ने । कृतिम ढंगले उत्पादन गरिएका सागसब्जी त्यती उपयोगी हुँदैन ।
तपाईले ख्याल गर्नुभएको छरछैन, खानाप्रति आशक्ति हुने व्यक्तिहरु रोगी हुन्छन् । धेरै खाने, मिठोमसिनो खाने व्यक्तिलाई रोगले समात्छ । लामो आयु बाँच्ने एक बृद्धाले भनेकी थिइन्, ‘थोरै खाउँ, धेरै बाँच ।’
धेरै खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छैन । धेरै खाँदैमा शरीरलाई आवश्यक पोषण पुग्छ भन्नु भ्रम हो । बरु पेटभर खानेकुरा खाँदा त्यसले पाचन प्रक्रियामा असर गर्छ ।
जति जति हामीलाई पैसाले पुग्दै जान्छ । जति हामी धेरै कमाई गर्न थाल्छौं । हामीलाई पैदल हिँड्न जाँगर चल्दैन । गाडी चढ्छौं । सब्जी किन्न जाँदा समेत गाडी नै चढ्ने बानी हुन्छ । हाम्रो सोचाई के पनि छ भने, पैदल हिँड्दा समय नष्ट हुन्छ ।
हामी गाडीको सुविधा उपभोग गर्न सक्ने भएपनि हिँड्नका लागि समय छुट्याउनुपर्छ । स्वस्थ्य जीवनका लागि पैदल हिँड्नु एकदमै फाइदाजनक छ ।
अहिले शहरिया तन्नेरीहरु राती जागा रहन्छन् । धेरैजसो राती ११, १२ बजेसम्म बस्ने गर्छन् । कोही पढ्छन्, कोही टिभी हेर्छन्, कोही सामाजिक सञ्जालमा विताउँछन् । जबसम्म निन्द्रा लाग्दैन, ओछ्यानमा घुस्रिदैनन् । खासगरी पढ्ने उमेरका युवाहरुमा यस्तो बानी छ ।
राती अबेरसम्म नसुत्नु समस्या नै हो । किनभने स्वस्थ्य जीवनका लागि सुत्ने र उठ्ने तालिका नियमित हुनुपर्छ । राती ९ बजेदेखि १० बजेसम्म सुत्नुपर्छ । बिहान सूर्योदयअघि उठ्नुपर्छ ।
चाहे तयारी जुस होस् वा कोल्ड ड्रिक, कुनै मिठाई होस् वा रेष्टुरेन्टको परिकार । यस्ता खानेकुरामा चिनीको मात्रा अत्याधिक हुन्छ । तर, चिनीले स्वास्थ्यमा फाइदा गर्दैन ।
प्रविधिको जमाना छ । डिजिटल युगमा प्रविधिलाई पन्छाएर अघि बढ्न संभव छैन पनि । सजिलो र छरितो कार्य(सम्पादनका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्नैपर्छ ।
हाम्रो परनिर्भरता यसरी बढ्दैछ कि त्यसले स्वास्थ्यमा गंभिर असर निम्त्याउँदैछ । अहिले हामी हरक्षण मोवाइल, ट्याबलेट, ल्यापटपमा विताउन थालेका छौं ।
यसले एकातिर हामीलाई शारीरिक रुपले निस्क्रिय बनाउँदैछ भने, अर्कोतिर त्यसबाट उत्पन्न विकिरणले स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउँदैछ । प्रविधिको सही प्रयोग गर्ने र फुर्सदको समयमा हिँडडुल गर्ने, टहल्ने गरौ ।
करियर, पैसा, परिवारको पछि लाग्दा लाग्दै हामी आफैलाई बिर्सन्छौं । कम्तिमा दिनमा एक घण्टा आफ्नो लागि छुट्याउन सकिन्छ ।
आफ्नो दिनचर्याको प्रारम्भ प्रातकालिन भ्रमण, व्यायामबाट गरौं । नियमित व्यायामले शरीर चुस्त, तन्दुरुस्त हुन्छ । रक्त संचार सही ढंगले हुन्छ । व्यायामलाई दिनचर्याकै एक हिस्सा बनाउन सके धेरै किसिमको रोगले संक्रमण गर्दैन ।
चुम्बन वा किस प्रेम प्रकट गर्ने सबभन्दा राम्रो तरिका हो । किस गर्दा सम्बन्ध बलियो हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ यसले स्वास्थ्यमा हानि पनि पु–याउँछ ।
खासमा किस गर्दा –याल एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पुग्छ जसले किसिङ रोग लगाउन सक्छ । अर्काको जुठो खाँदा पनि यो समस्या आउन सक्छ । यसले शरीरमा एपस्टीन नामक भाइरस फैलाउँछ । यो भाइरस –यालमार्फत मानिसको शरीरमा पुग्छ । यसबाट रक्ताल्पता तथा कलेजोको समस्या आउन सक्छ ।
किसिङ रोगका लक्षणमा थकान र कमजोरीको अनुभव, लगातार ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, गलामा पीडा आदि पर्दछन् । यसबाट बच्नका लागि अर्काको जुठो नखानुस् । अनि किस गर्दा मुख सफा राख्नुस् । बच्चाहरूलाई किस नगर्नुस् किनकि उनीहरूमा छिट्टै संक्रमण हुन्छ ।
Up Next छालामा चमक ल्याउन चाहनुहुन्छ भने यस्ता खानेकुरा खाने गर्नुहोस् – जानकारीका लागी शेयर गर्नुहोला
उखुको रस पिउँदा थाहा पाउनुपर्ने कुरा
गर्मि मौसममा उखुको रस पिउँदा स्वास्थमा धेरै फाईदा पुग्छ । तर हामीले थाहा पाउनुपर्छ उखुको रस कस्तो ठाउमा बनेको हो भन्ने बारेमा…
यस्ता छन्, आलसका फाईदा
आलसको बीजबाट बनेको काढा नियमित रुपमा सेवन गर्नाले कयौँ बिमारीको नियन्त्रणका लागि मद्दत पुग्ने गर्दछ । यसको सेवनले शरिरमा रहेको…